Ita WordPress plugins Mari Mari? - Dzidza Nyanzvi Kubloga
Ita WordPress plugins Mari Mari?
Nguva yekuverenga:4 mins verenga
WordPress ipuratifomu yakanyanya kushandiswa paInternet padyo 41% yevashandisi vanovaka yavo webhusaiti paWordPress. Iyo yemahara, open-sosi, uye ine mukana wakakura wekuchinja. Iwe unogona kuwedzera iwe unodikanwa nzira uine yakawanda yekugadzirisa sarudzo kuburikidza nema plugins.
WordPress plugins akasununguka aine mashoma maficha. Ivo vanokutengera iwe mari kuti utore mukana wezere maficha. Kubhadhara kwacho kunogona kuve kweimwe-nguva kana kudzokorora kunoenderana nebasa rauri kuwana.
Plugins ndiwo chikamu cheiyo WordPress Platform. WordPress pachayo software yemahara iyo inobvumidza iwe kuti gadzira mawebhusaiti uye mabloggi aunoda. Iwe unogona nyore kugadzirisa, wedzera mitsara yemakodhi, repackage, tengesa uye ugovanisa sezvo iri open-source yemahara software pasi peveruzhinji rezinesi. Zvinoreva kuti hapana chinorambidzwa kuita rakadai sevhisi. Zvisinei, vatengi vanobhadhara mushambadzi kuti awedzere kodhi uye nekuvandudza maitiro sezvaanoda.
WordPress plugins inodhura mari
Mahara uye Freemium WordPress plugins
Pamusoro peizvi, WordPress plugins zvakare chidimbu chemakodhi emakodhi, izvo zvinoshanda sekuwedzera maficha. Ini ndinogara ndichikurudzira kuti mutengi wangu abhadhare ma premium maficha emapulagi ekuwedzera mashandiro. Kuva asiri PHP coding yekuvandudza, Ini ndinogara ndichitora rubatsiro rwema plugins.
Pese pandinovaka webhusaiti kune wangu mutengi, Ini ndinogara ndichifunga kuvaka yakakwana yakazara webhusaiti nerubatsiro rwemahara plugins. Handimboedze kuwedzera kushandisa kwavo. Dzimwe nguva, nyaya yacho inoitika kana vamwe vevatengi vangu vachida zvemberi zvehunyanzvi mawebhusaiti. Ichi chishuwo chinondimanikidza kuti ndiende kune zvemhando yepamusoro.
Saizvozvowo, mwedzi mishoma kumashure ndakatenga iyo “Elementor pro plugin“. Iyi plugin ikozvino izuva rawana mukurumbira mukuru. mukana wepulagin iyi ndeyekungo wedzera mitsara yekodhi kumashure. Neiyi plugin, wedzera kudhonza uye kudonhedza chimiro chinonditendera kuti ndikure mukati memazuva mashoma. Izvi “Elementor pro” plugin inodhura ini 1000 pamwe nemadhora pagore zvichidzokororwa.
Freemium plugins akangoita kunge ice cream kuravira. Iwe haugone kuwana inodiwa scoop. Asi iwe unogona nyore kuziva kuti iyo chaiyo WordPress plugin inoshanda sei, zvichabatsira sei kana iwe ukaenderera nebasa ravo?
Kana iwe uri wega wekutanga, Ini pachezvako hausi iwe kuti uende kune premium plugin padanho rekutanga. Iwe unofanirwa kugadzira webhusaiti ine yakakosha maficha pane kuvaka kusvika kune yehunyanzvi nhanho. Sezvo iwe uchikura pamwe nebhizinesi rako kutenga premium plugin ichaita kunge chimedu chekeke.
Kunze kweizvi ini pachezvangu ndinokurudzira kuti usatorere premium plugins zvisina hunhu. Sezvandataura kwauri pakutanga, ivo vanogadzirwa pasi peyakajairika ruzhinji rezinesi. Zvinoreva kuti chero munhu anogona kuwedzera mitsara yekodhi kwairi, repackage uye woiisa painternet kunyorera mahara.
Chinhu chinokanganisa kurodha pasi zvisiri pamutemo ndechekuti vane chidimbu chekodhi chinogona kuteverwa zviri nyore uye vanogona kubira webhusaiti yako zviri nyore pane inotevera nhanho.. Kubiridzira zvinoreva kuona yavo yega-yakanyorwa chidimbu chekodhi. Ivo vanoziva nzira yekutyora iyo kodhi uye kuwana mukana kune webhusaiti. Izvi zvinotova kusagadzikana kwauri. Isu pachedu tinokurudzira kuti utore mapulagi kubva kune mukuru WordPress repository.
Pakazara, Mamwe plugins eWordPress anokudyira mari, kune zviuru zvemapulagi muiyo WordPress repository. Unogona kuwana nyore imwe imwe kana imwe. Kana mumwe munhu achikubhadhara iwe, hazvireve kuti imwe nzira yekugadzira plugins ichiita saizvozvo. Pamusoro pazvose, plugins anokudyira mari pamwedzi, gore rimwechete-nguva, kana zvichingodzokororwa, zvinoenderana zvachose nezvaunoda kuti unoenda sei nazvo.
Izvo vamwe varikuverenga?